एक ट्राफिक प्रहरीको जिम्मामा ९ सय सवारीसाधन ! कसरी हट्छ जाम ?
काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीसाधनको उच्च भार पर्ने गरेको देखिएको छ ।
उपत्यकामा १ जना ट्राफिकलाई औसतमा ९ सय सवारीसाधन भागमा पर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्यांकले देखाएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी १ हजार ८४ छ । हाल कार्यरत १ हजार ३ सय ६८ जना ट्राफिक प्रहरी रहेका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकालले बताए ।
१ जना ट्राफिकलाई झण्डै १० किलोमिटर सडकको जिम्मा !
काठमाडौं उपत्यकामा १ जना ट्राफिक प्रहरीलाई ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रको व्यवस्थापन हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको महानगरीय प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो देखिने प्रमुख एसएसपी ढकालले लोकान्तरलाई बताए ।
उपत्यकामा १ लेनको ६ सय ६० किलोमिटर, २ लेनको २ सय ३९ किलोमिटर र ४ लेनको १ सय ९३ किलोमिटर गरी जम्मा २ हजार १४ किलोमिटर रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
९४ प्रतिशत सवारीसाधन निजी
देशभरमा असार मसान्तसम्ममा ३३ लाख २७ हजार १ सय ४८ वटा निजी सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो संख्या सम्पूर्ण सवारीसाधनको ९४ प्रतिशत हो । सार्वजनिक यातायात ४ प्रतिशत भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हालसम्म देशभरमा ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमध्ये ११ लाख ७२ हजार ४ सय १३ वटा सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकामा छन् । देशभर रहेका सवारीसाधनमध्ये ३० प्रतिशत उपत्यकामा रहेका छन् ।
‘ट्राफिक प्रहरी थप्दैनौं, लाइट थप्छौं’
काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको सवारीसाधनको चापलाई नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरी थप नगर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकालले बताए ।
‘हामी ट्राफिक प्रहरी थप गर्नभन्दा पनि प्रविधिलाई प्रयोग गर्नेतर्फ लक्षित गर्दैछौं । हामीले स्मार्ट ट्राफिक प्रहरीको अवधारणा अघि सारेका छौं,’ प्रमुख ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन सीसीटीभीको माध्यमबाट पनि गरिरहेका छौं । सीसीटीभीबाट निगरानी गरेर ट्राफिक प्रहरीले नियमको उल्लंघन गरेका सवारीसाधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं,’ एसएसपी ढकालले भने ।
काम नलाग्ने ‘ट्राफिक लाइट’
उपत्यकामा बानेश्वर, थापाथली, पुतलीसडक, नारायण गोपाल चोक, कोटेश्वर, भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा गरी १४ वटा ठाउँमा ट्राफिक लाइट राखेको थियो । उपत्यकाका ३७ ठाउँमा युरोपजस्तै ट्राफिक लाइट राख्ने भनेर २०७३ पुसमा ट्राफिक प्रहरीले घोषणा गरेको थियो तर जोडिएका ट्राफिक लाइट देखाउने भाँडो मात्र भएका छन् ।
‘उपत्यका भित्रका सबै लाइटलाई एकआपसमा जोड्नुपर्ने भएकाले हामीले ती लाइटलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं,’ ट्राफिक प्रमुख एसएसपी ढकालले भने, ‘अझै अरु लाइटहरू थप्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउने छन् ।’
उपत्यकाका ट्राफिक टाइटलाई स्वचालित हुने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको प्रमुख ढकालले बताए । ‘स्वचालित हुँदा धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन । ट्राफिक प्रहरीलाई सीसीटीभीको निगरानी गर्न लगाउँछौं,’ उनले भने ।
१ दिनमा १२ सय सवारी कारवाहीमा
काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले १ दिनमा १२ सय ५५ वटा सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ । बुधवार मापसेका ६२ वटा, लेन अनुशासनमा १ सय ७ वटा, जेब्रा क्रसिङमा सवारीसाधन रोक्ने ४७ वटा, ट्रक टिप्पर १२ वटा, फूटपाथमा पार्किङ गर्ने ७९ वटा, हर्न बजाउने ४५ वटा ‘ह्विल लक’ तथा ‘चेन लक’ ७६ वटा, सीसीटीभी र सर्भिलियन्स क्यामेराबाट कारवाही ७६ वटा र अन्य कारवाही ७ सय ३७ वटा गरी १ हजार २ सय ५५ वटा सवारीसाधन कारवाहीमा परेका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
६० लाख ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ